Wasaaradda kalluumaysiga Puntland oo shir u qabtay ganacsatada kalluunka iyo daladaha hoosyimaada – Radio Daljir
Febraayo 4, 2013 5:49 b 0
Bosaso, Feb 04 – Wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowladda Puntland ayaa maanta kulan u qabatay kalluumaysatada iyo dadka ka shaqeeya howlaha hormarinta kalluumaysiga ee ka howlgala gobolka Bari.
Kulaanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii shacabku ay uga wada faa’iidaysan lahaayeen mashaariic ay waddo wasaaradda kalluumaysiga oo ay taageero ka helaysa hay’adda FAO, mashaariicda ayaa waxaa isugu jiraan suuq kalluunka loogu talagalay oo laga hirgalinayo magaalada Bosaso iyo qaboojiyeyaasha kalluunka lagu kaydiyo.
Agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga C/waaxid Xirsi Joocaar oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay muhiimadda kulanka inuu xambsaarsanyahay sidii shacabku ay si wada jir uga wada shaqayn lahaayeen goobaha danta guud ee dowladda ay u dhisi doonto.
Waxaa uu sheegay kulanka in la isku afgartay dhamaan qodobadii laga hadlay, ganacsatada ayuu kula dardaarmay inay ka faa’iidaystaan wax soo saarka kalluunka ee badda.
Kumanaan qof ayaa ku tiirsan wax soo saarka badda ee kalluunka ugu horeeyo, waxaa hadii ay hirgasho talaabadan ay noqon doontoo mid daboosha baahiyo badan oo dadka kalluunka ka shaqeeya ay qabaan.
Photo by: Axmed Nuur Ibrahim Somali